today myanmar_s nuclear.....doc 0.632 MB
Today Myanmar's Nuclear...
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/04/20100အကြံပြုခြင်း
4 June 2010 yeyintnge Diary.doc 5.660 MB
4 June 2010 Yeyintnge Diary
လေ့လာဆည်းပူးခွင့်ရခဲ့တယ့်။
နောက်ပြီး --- --- ---
ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်ဆိုတာကို သိခဲ့တယ့်။
တတ်စွမ်းသမျှလောကအကျိုးဆောင်နိုင်ဖို့အရေ့း။
တချို့လူတွေက အမှန်ကိုသိသလိုလိုနဲ့ -----
ယုတ်မာမူအပေါင်းသရဖူ ဆောင်းပြနေကြရဲ့။
လောကအလှကိုဖျက်နေကြလေရဲ့။
ဒါ့အညတရတယောက်ရဲ့ -----
စကားလုံးတချို့တော့ပါတယ့်။
ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာပဲ့။
အောင်ပွဲဆိုတာက တိုက်ရဲ့သူတွေအတွက်ပဲ့။
ခက်ထန် Friday, June 04, 2010
၁၆.၅.၂၀၁၀ နေ့ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ် ဒလူးရယ်ကျေးရွာတွင် လူသတ်ဓားပြတိုက်ခဲ့သည့် တရားခံများအား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရရှိမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ဋ္ဌာနချုပ်မှ ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ချက်...
မူရင်း... နှင့် ယနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဓာတ်ပုံများ...
ဓားပြမှုကျူးလွန်စဉ်က စစ်အစိမ်းရောင် ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်၍ ????? အမှတ်စဉ်(၁၃)မှာ ပါတာပါ.....
ဓားပြတိုက် လူသတ်တာ အေးလွင်လည်း ပါပါတယ်တဲ့...???? အမှတ်စဉ်(၈)မှာပါတာပါ..
၎င်းလူသတ် ဓားပြမှုကြီးကို ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှုးက အနီးကပ်ကြီးကြပ်၍...????? အမှတ်စဉ် (၃)မှာပါတာပါ။
နောက်ဆုံး အရင်းချုပ်လိုက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ပါပဲ....
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မကြာခင်မှာ သတင်း ၀က်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုလည်း အင်တာနက်ပေါ်သို့တင်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ၊တစ်ခါစား စစ်အစိုးရဖော်လံဖား မြတ်ခိုင်က ရဲချုပ်ခင်ရကို ကူညီမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ၊သတင်း ပေးပို့လာသူကတော့... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်သူအတွက် ရဲရဲတောက် ဘားမား ပါပါရာဇီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗမာပြည်အလုပ်သမားလူတန်းစားဟာ၊ ခေတ်မီအလုပ်သမားလူတန်းစားအဖြစ်စတင်ဖြစ်တည်လာစဉ်ကတည်းက၊ အလုပ်သမားလူတန်းစားရဲ့သူရသတ္တိကို ပြသခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှုကို ပြသခဲ့ပါတယ်။
မဆလ ခေတ်ကို ရောက်တော့လဲ၊ ဖေါက်ပြန်ဆိုးဝါးလှတဲ့ မဆလတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တွန်းလှန် တိုက် ပွဲဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု သမိုင်းမှာ၊ ဘယ်တော့မှဖျောက်ကွယ်ချန်လှပ်ထားလို့မရနိုင်တဲ့ အလုပ် သမား တိုက်ပွဲတခုကတော့၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇွန် (၆)ရက် အလုပ်သမားသပိတ်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
‘ ၇၄ ဇွန် (၆) အလုပ်သမားသပိတ်ကြီး’ လို့ မော်ကွန်းထိုးထားရမယ့် အလုပ်သမားသပိတ် တိုက်ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ သပိတ်ကြီးကို မဆလစစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ထုံးစံအတိုင်း အကြမ်းဖက်ဖြို ခွဲပြီး၊ နှိပ်ကွပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် သွေးမြေကျရမှု တွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဇွန် (၆) ရက်နေ့မှာပဲ ပထမဆုံးသွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့နေရာကတော့၊ ရန်ကုန် သ မိုင်း ချည်စက်ရှေ့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကအဖြစ်အပျက်ကို ကိုယ်တွေ့ တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသူတယောက်အနေနဲ့ မြင်ရာ ဒေါင့်ကနေ လေးလေးနက်နက်မှတ်တမ်းတင် ဖေါ်ပြပါရစေ …
မနက်မိုးလင်းလို့ စက်ရုံအလုပ်သမားကြီးတွေ အလုပ်ဆိုင်းအလိုက် အလုပ်ဝင်ကြချိန်သာသာလောက်မှာပဲ၊ရန်ကုန် အင်းစိန်လမ်းမကြီးတလျောက် ကြွေးကြော်သံတွေ ပျံ့နှံ့ဝေစည်လာပါတယ်။
ကြွေးကြော်သံတွေဟာ မုတ်သုန်အကြို မိုးသက်လေနဲ့အတူ လမ်းမကြီးတွေပေါ် ရပ်ကွက်တွေပေါ်ဝဲပျံလွင့်စင်နေပါ တယ်။
ကျနော်ဟာ အင်းစိန်မီးရထားစက်ခေါင်းရုံဖက်ဆီ ပြေးကြည့်မိပါတယ်။ အလုပ်သမားထုရဲ့ကြွေးကြော်သံတွေဟာ မိုး လုံးညံအောင် ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ အဲဒီကနေအင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ် ပြန်တက်လာ၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီးတ လျောက်အတိုင်းကုန်ကြောင်းလျှောက်ပြီးပြန်လာတော့၊ ခဝဲခြံမှတ်တိုင်ရှေ့တည့်တည့်က ၅ သုံးလုံး ရာဘာဖိနပ်စက် ရုံကြီးအတွင်းမှာလဲ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီစက်ရုံထဲမှာ ကျနော့် မိတ်ဆွေရင်းချာအလုပ်သမားတချို့ ရှိနေ တဲ့အတွက် ခဏရပ်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ မကြာခင်ကြွေးကြော်သံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဆက်ပြီးထွက်လာတော သမိုင်းလမ်းဆုံက ဓါတု (၄) ၊ ဓါတု (၆)စက်ရုံတွေက ကြွေးကြော်သံတွေဟာလဲ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ထွက်လာတာ ကြားရ ပြန်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်တက်လာတော့ ‘သမိုင်းချည်မျှင် နှင့် အထည်စက်ရုံ ’။
ကြွေးကြော်သံတွေဟာ စက်ရုံတွေအတွင်းကနေ ညီညီညာညာထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ ပထမတော့အတွင်းပိုင်း စက်ရုံတွေ အတွင်းကနေပဲ ထွက်ပေါ်လာနေတာပါ။
သမိုင်းချည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံ ကြီးရဲ့ တည်ဆောက်ထားပုံက၊ လမ်းမကြီးဖက်(ဆိုင်းဘုတ်ကြီးထူထားတဲ့ဖက်)မြေ ကွက်လပ်ကျယ်ကြီးပေါ်မှာ၊ ဂိတ်ပေါက် သံတံခါးကြီးနဲ့အနီးမှာ တထပ်တိုက်အဆောက်အဦ ရှည်ကြီးတခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီအဆောက်အဦမှာ ရုံးခန်းနဲ့ငွေစာရင်းဌာနတို့ ဆိုတာတွေ ရှိပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာ အလုပ်သမားကောင်စီ လို့ဆိုင်းဘုတ်တပ်ထားတဲ့ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ အလုပ်သမားမင်းသားများရဲ့အခန်းရှိပါ တယ်။ အဲဒါတွေပြီးတဲ့နောက်၊ သံတံခါးနဲ့ ထပ်ပြီးခြားထားတဲ့ဝန်းပြင်ကျယ်ကြီးပေါ်မှာ ချည်မျှင်နဲ့အထည်စက်ရုံတွေ သူ့ရုံ နဲ့သူ အစီအရီတန်းစီတည်ရှိနေပါတယ်။ ပထမဆုံး ကြွေးကြော်သံတွေ တိုင်နေ ထွက်နေတဲ့နေရာက အဲဒီအ တွင်းစက်ရုံတွေအတွင်းကပါ။ နောက် မကြာမီမှာပဲ အထဲက သပိတ်ခေါင်းဆောင်တချို့ ထွက်လာပြီး၊လမ်းမကြီးဘေး က ဂိတ်ပေါက်ဝကြီးဆီ ရောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
ဂိတ်ဝသံတံခါးဘေးမှာ စားပွဲခုံတလုံးကို ချလိုက်ပြီး၊ စားပွဲပေါ်တက်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ကာ သပိတ်တရားကိုဟောကြပါ တယ်။
အလုပ်သမားထုတရပ်လုံး အလုပ်လုပ်နေကြရင်းက ထမင်းငတ်နေရတဲ့အကြောင်း၊ ဒါကြောင့်ဆန်လုံလောက်စွာရရှိဖို့ တောင်းဆိုနေရတာဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်ခွင်ထဲမှာလဲအာမခံချက်မဲ့လှတဲ့အခြေအနေကြောင့် လုပ်ခွင်သက်သာ ချောင်ချိရေးကို ဖန်တီးပေးဖို့တောင်းဆိုနေရတာဖြစ်သလို၊ လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့ ဦးဆောင်မှု ဆိုတာနဲ့အတူ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေထဲမှာလဲ အလုပ်သမားကောင်စီဆိုတာတွေ ပေါ်လာပြီး၊ ဒီအလုပ်သမားကောင်စီတွေဟာအလုပ်သမားတွေအ တွက် ဘာမှလုပ်မပေးတဲ့အပြင် ဖိနှိပ်ဒုက္ခပေးဗိုလ်ကျနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်အဖြစ်ပဲ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ဒါကြောင့် ဒီအလုပ်သမားကောင်စီဆိုတာတွေကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုနေကြရတာဖြစ် ကြောင်း ဟောကြ ပြောကြရှင်းပြကြပါတယ်။
လက်တွေ့ ဘဝထဲကလာတဲ့၊ လက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေကြောင့်၊လက်တွေ့လိုအပ်ချက်အစစ်အမှန် ကို ရရှိရေးအတွက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကြွေးကြော်သံတွေဟာအင်မတန်မှ တရားမျှတပြီး အင်မတန်မှ ကြောင်းကျိုးကျ တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေလဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျနော်အပါအဝင်၊ ရပ်ကွက်တွေထဲက လာရောက်နားထောင်ကြသူ၊ ကြည့်ကြရှု့ကြ အားပေးကြသူတွေလဲတဖြည်း ဖြည်းများလာပါတယ်။ တချို့ကလဲ သပိတ်မှောက်နေတဲ့ ဒီစက်ရုံထဲမှာ ကိုယ့်မိကိုယ့်ဖ ညီအကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုးသား ချင်းတွေပါ ပါနေလို့ အခြေအနေလာကြည့်ကြသူမျိုးတွေလဲပါနေပါတယ်။
100603_bty_bur_nulcear.pdf 0.122 MB
100603 Bty Bur Nulcear
နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများတွင်နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားသူများသည် နိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများကသာ လျှောက်ထားခွင့် ရှိပါသည်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ-၂၁ တွင် မည်သူများသည်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြောင်း ပြဌာန်းထားပါသည်။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း၏အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်းကောင်း မည်သည့်ဥပဒေတွင်မျှ ဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိပါ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ-၂၁အပိုဒ်(၉) အရ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးကို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ (ဦးကျော်သိန်း နှင့် ပြည်ထောင်စုပါ ၂၊ ၁၉၅၉မြန်မာပြည် စီရင်ထုံး ၁၄၅ လွှတ်တော်ချုပ်)
ထို့ပြင် ဦးသန်းမောင် နှင့် ပြည်ထောင်စု (၁၉၆၁ ၊ မြန်မာပြည်စီရင်ထုံး၁၉၇ လွှတ်တော်) တွင် “နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်သည် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်၍ ၀န်ကြီးဆိုသော စကားတွင် အကျုံးဝင်ကြောင်းထုံးဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဆိုသော စကားရပ်နှင့်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုသောစကားရပ်တို့ကို စီစစ်ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ပါသည်။အစိုးရထုတ်ဝေသော ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဟု လည်းကောင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် “Public servant”ဟုလည်းကောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
မြန်မာစာ ကော်မရှင်က ထုတ်ဝေသော မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်တွင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း n/ Civil servant; government employee ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
တစ်ဖန် နိုင်ငံဝန်ထမ်းကို n/ Civil servant ဟု မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။နိုင်ငံဝန်ထမ်း နှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းမှာအဓိပ္ပါယ် အတူတူဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် ၀န်ကြီးများသည်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း သို့တည်းမဟုတ် နိုင်ငံဝန်ထမ်း ဖြစ်ကြပါသည်။
နိုင်ငံရေးရာထူးတာဝန် (Political Position) သည် နိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခြင်းမှာ မှန်ကန်မှု မရှိပါ။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များလည်း မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံဝန်ထမ်းများက နိုင်ငံရေးပါတီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၊နိုင်ငံဝန်ထမ်းများက နိုင်ငံရေးပါတီတွင်အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်ပါဝင်ခြင်းမှာ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်နေပါသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်နေသဖြင့် နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ်က နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခြင်းမှာ အစကပင် ပျက်ပြယ်နေသော (Void Ab initio)ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
volume 1 issue6jun 2010.pdf 2.203 MB
Volume 1 Issue6Jun 2010